I-FreeOffice 3.5.3 iyatholakala ngokulanda | Kusuka kuLinux
Kutholakalela ukulanda i-LibreOffice 3.5.3
Ikhishwe yi Idokhumenti Isisekelo la Inguqulo ye-3.5.3 de LibreOffice, ukukhululwa okwandisa ukuzinza nokusebenza kwalokhu okuhle kakhulu Ihhovisi Suite.
Uhlu lokushintsha (ezingeni eliyinhloko) ungayibona ku lesi sixhumanisi futhi ku lokhu okunye. Esihlokweni basho ukuthi abathuthukisi abayi-10 bangabafundi ku- Ihlobo le-Google yekhodi ye-2012 futhi bazosebenza kulokhu kuthuthukiswa okulandelayo:
Ukuthuthukiswa kokusebenza kweCalc;
Ukuthuthuka kokungenzi ukukhanya;
Ukuhlelwa kwesipredishithi esisebenzisanayo kusetshenziswa i-Telepathy;
Isihlungi sokungenisa seMicrosoft Publisher;
Amasiginesha ekuthekelweni kwe-PDF;
Isilawuli kude se-Smartphone;
Isibonisi esisha sokukhetha izifanekiso;
I-interface yomsebenzisi yokuqhafaza esekwe kuJava yombukeli we-Android;
Thuthukisa i-Impress yesihlungi sokuthumela ngaphandle kwe-SVG;
Amathuluzi okuhlolwa okungcono futhi okungcono.
Le nguqulo entsha ingalandwa kusuka ku- lesi sixhumanisi.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Kutholakalela ukulanda i-LibreOffice 3.5.3
Izindaba ezimnandi. ILibreOffice iyihhovisi elihle kakhulu futhi elingcono kakhulu kunakho konke, aliphumuli kokuzithokozisa kwalo. Ukuphela kwento engingathanda ukuyibona esikhathini esizayo esingekude kakhulu ukwakheka kabusha kwesixhumi esibonakalayo, okudala ukuguga.
Ngicabanga okufanayo, i-LO izuze ngozinzo, ngicabanga ukuthi isinyathelo esilandelayo yi-interface
Ngifuna nokuthuthukisa isikhombimsebenzisi kancane
Ngabe lokho kulawulwa kude kwama-Smartphones? Ku-android ngiyilanda kusuka ku-google play? Ngaphandle kwalokho i-suite enhle kakhulu kepha kufanele bathuthukise i-interface kancane, okuvela kuma-90s ngenye indlela ukuhalalisela
Waoo, ama-Agent womsebenzisi wawo wonke umuntu abukeka emuhle kakhulu !! ^^
Futhi kungani kungasekho okhulumayo (osebenzisa?) I-OpenOffice futhi ???
Kusukela i-Oracle ithole i-Sun, futhi nayo, iphrojekthi ye-OpenOffice, ilahlekelwe yintshisekelo kuma-distros nabasebenzisi abaningi, ikakhulukazi ngenxa yezinyathelo ezilwa ne-Linux le nkampani ezithathile.
Ngoba I-OpenOffice wemba ithuna lakhe, noma ngabe laliyingxenye ye- SUN. Noma Oracle unikele ngephrojekthi ukuze Apache (uma ngingenaphutha) ya LibreOffice ibikade ingaphambili futhi kuze kube manje ayinakunqandeka. ILibreOffice ithuthukiswe ngokwengeziwe, inokuthuthuka okusebenzayo futhi akuyona eyanoma iyiphi inkampani, ingasaphathwa leyo, pro-Windows.
Kuhle kangakanani 🙂 futhi bangaki abenza umklamo? Kuhle ukubona ukuthi lowo wenza ngcono ukuhambisana neCalc.
I-ArchBang Linux 2012.05 ikhishwe